ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): July 2006
Posted by LIN LET KYAL SIN at 12:15 PM 1 comments Links to this post
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်မနှလုံးသားကနေ့စဉ်နဲ့အမျှ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ နာကျင်နေပါတယ်.. အသေးအမွှားကိတ်စလေးတွေကအစ ကျွန်မစိတ်ညစ်ရပါတယ်.. ဥပမာဆိုပါစို့.. ကျွန်မရေချိုးခန်းဝင်နေတယ်. ကျွန်မဘိုးတော်က ဖုန်းခေါ်ပါတယ်.. ကျွန်မ မကြားလို့မကိုင်လိုက်မိဘူးဆိုရင် ကျွန်မအတွက် အဲဒီနေ့ငရဲပါပဲ. ကျွန်မကို ပြောထားပါတယ်. တစ်အိမ်လုံးဖုန်းတွေနေရာအနှံ့တပ်ထားတယ်.. ဘယ်နေရာမဆိုရှိတာ သေရေးဖြစ်နေရင်တောင် ဖုန်းကိုင်ရမတဲ့… နောက်တစ်ခု -- ထမင်းစားချိန်ပါ… ကျွန်မက အသားစားတာနည်းပါတယ်. အဲဒါလည်း အမြဲအမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်မကို အစားရှောင်လို့တဲ့လေ.. နောက်တစ်ခု --- ကျောင်းကပြန်တာ အိမ်ကို ၁၀မိနစ်ထက်ပိုနောက်ကျ၇င် ကျွန်မအတွက် အဲဒီနေ့ အပြတ်အသတ်တိုက်ပွဲပါပဲ.. အဲဒီလို အသေးအမွှားပေါင်းများစွာကအစ အကြီးဆုံးပြသနာတွေထိ ကျွန်မရဲ့နေ့စဉ်ပြသနာပါ…
Posted by LIN LET KYAL SIN at 8:44 PM 13 comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 5:11 PM3comments Links to this post
မြန်မာပြည်ရဲ့ ရွှေရောင်အလင်းသခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
( မိုးမခစာဖတ်ခန်းမှ )
Posted by LIN LET KYAL SIN at 3:34 PM2comments Links to this post
ဒီနေ့ကတော့ လင်းနဲ့သိပ်ခင်ရတဲ့အကိုမွေးနေ့ပါ…… အကိုဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းများစွာကို အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးနဲ့အတူ ထပ်တူဆွတ်ခူးရရှိနေပါစေလို့ ဂျူးဆုတောင်းပြုပေးနေပါတယ်….
အကိုနဲ့လင်းလက်က အခင်ဆုံးမောင်နှမတွေဖြစ်သလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လိုတာရှိ၇င် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြသူတွေပါ…. အကိုက လင်းလက်ကို အပြင်မှာ အတော်များများကူညီပေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို အနွံတာလည်းခံပါတယ်.. တစ်ခါတစ်လေ လင်းအိမ်မှာ ပြသနာတွေဖြစ်ပါတယ်… တစ်ခါတစ်လေ လင်းသေချင်လောက်အောင် စိတ်ညစ်ပါတယ်.. အဲဒီအခါမှာ တစ်ခြားမောင်နှမတွေက အဝေးမှာဖြစ်နေတယ်.. အကိုက လင်းကို အများကြီးအားပေးခဲ့သလိုဖြစ်သလို ဘယ်အရာမဆို ကူညီရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်…
စိတ်ဆိုးမိချိန်မှာ လင်းဘာပြောပြော သူကစိတ်မဆိုးရပါဘူး.. လင်းကချည်း အရင်စိတ်ဆိုးသွားတတ်လို့ပါ. ဟိဟိ.. အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စိတ်တိုရချိန်ဆိုရင်လည်း စိတ်မတိုဖို့ သူက အကြံပေးတတ်ပါတယ်… အကိုက စိတ်ကောင်းရှိသလို သူများကိုလည်း အရမ်းအားနာတတ်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် တစ်ချို့သောမိန်းမတွေက အခွင့်ကောင်းလာလာယူတတ်တိုင်း လင်းကချည်း အကုန်လုံးတပ်ဆုတ်အောင် ကန်ထုတ်ပေးလိုက်တယ် ဟိး
လင်းဘ၀မှာ အမှတ်တရမောင်နှမတစ်ဦးဖြစ်သော အကို အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေပါစေ..
Happy Birthday, My Dearest Brother.. May God Bless You Always !
Posted by LIN LET KYAL SIN at 2:11 PM 1 comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 12:00 PM2comments Links to this post
ကိုကြီးဟန်မင်းထွန်း အကိုအောင်သူမိုးတို့နဲ့ သိပ်ခင်တဲ့ လင်းမိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ သူက လင်းဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုရဖို့ကြိုးစားရန် အမြဲသတိပေးနေတဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းပါ.. မကျေနပ်ချက်တွေများလာလို့ လင်းစကားများတော့မယ်ဆိုရင် သူက လင်းထားရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကိုယ်ကျင့်တရားကို မထိခိုက်ဖို့ အမြဲသတိပေးတော့ ရံဖန်ရံခါ စကားနဲ့အနိုင်ပြန်ယူချင်တဲ့လင်းမှာ လက်တွန့်သွားရတယ်.. ဟိန်းတားမြစ်မှုကြောင့် မဖြစ်သင့်တာ အတော်များများ မဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက်လည်း အမြဲတမ်းကျေးဇူးပါဟိန်း..
ဟိန်းက လင်းကို အတော်ခင်သလို လင်းလည်းခင်ပါတယ်.. ဟိန်းက ကျန်းမာရေးအတွက် အမြဲပြောလေ့ရှိသလို သူက ရိုးသားကြိုးစားသူတစ်ယောက်ပါ… အေးချမ်းစွာနဲ့ စိတ်ဆိုးခြင်းလည်း သ်ိပ်မရှိပါဘူး…
ချင်းမိုင်မှာ ပညာသင်ကြားနေတဲ့ ကိုကြီးတစ်ယောက်ပါ……… လင်းဘ၀မှာ အတောင်းပန်သင့်ဆုံးလူဆိုလို့ သူတစ်ယောက်တည်းရှိပါတယ.. ကိုကြီးအောင်ချမ်းအေးက လင်းကို သိပ်ကိုခင်ပြီး ခွင့်လွှတ်မှုတွေများပေမယ့် လင်းကတော့ သူနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အနိုင်ယူခဲ့တာများနေပါတယ်…
အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးတဲ့ ကိုကြီးကို လင်းလေးစားလျက်ပါ… ဘ၀မှာ နာကျင်မှုဒဏ်တွေကို ခံရတဲ့သူတွေထဲမှာ ကိုကြီးမိသားစုလည်းအပါအ၀င်ဆိုတာ လင်းသ်ိပ်နားလည်ပါတယ်ကိုကြီး..
snack စားရတာသိပ်ကြိုက်တဲ့ကိုကြီးကို လင်းသတိရလျက်ပါ… အသက်ငယ်ငယ်တုန်းက မဆင်မခြင်ပြောခဲ့မိတာတွေအတွက် ဂျူးကိုခွင့်လွှတ်ပါကိုကြီး…
ကိုကြီးဘ၀မှာ ကိုကြီးမိသားစုပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုပြန်လည်ရရှိပြီး တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ် ထားရှိတဲ့ ကိုကြီးတို့အားလုံးကြိုးစားမှုတွေ အမြန်ဖြစ်မြောက်လာစေဖို့ ဂျူးအမြဲဆုတောင်းပေးလျက်ပါကိုကြီး..
တောင်ကိုရီးယားက လင်းရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သလို လင်းစာတွေအားလုံးကို ဒိုင်ခံဖတ်ပြီး သေချာအသေးစိပ်ဝေဖန်ပေးသူတစ်ယောက်ပါ..
ကိုကြီးကျော်စွာက သူကိုယ်တိုင်လည်းကဗျာတွေရေးသလို လင်းနဲ့က အနုပညာမောင်နှမတွေလို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြောလေ့ရှိပါတယ်.. စိတ်ဓါတ်ကျတိုင်း လင်းကို အားပေးခဲ့တာတွေအတွက် ကျေးဇူးပါကိုကြီး…. မေးလ်တွေမှန်မှန်ပို့ပြီး ကိုကြီးက လင်းဘေးအမြဲရပ်တည်ပေးခဲ့ပေမယ့် လင်းကတော့ ဘာတွေအလုပ်ရှု့ပ်မှန်းမသိအောင်ရှုပ်နေတာလည်းနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်ဟိး
မျှော်လင့်ထားတဲ့တစ်နေ့မှာ ကယားပြည်နယ်ထိ လိုက်လည်မှာနော်ကိုကြီးရေ……. လင်းသိပ်ခင်ရတဲ့ အဝေးက အနုပညာမောင်နှမ ကိုကြီးလိုချင်တဲ့အေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀တစ်ခုကို သက်ဆုံးတိုင်ရရှိနိုင်ပါစေကိုကြီး..
ဆွိ ( သြဇီ )
လင်းသိပ်ခင်ရတဲ့ ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ပါ.. ဆွိနဲ့လင်းက စကားပြော အတော်ဖြောင့်သလို စိတ်ဓါတ်ချင်းလည်းတူကြပါတယ်.. ညီအမလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သိပ်ချစ်ကြတာမို့ စကားပြောလည်း ပွင့်လင်းကြပါတယ်.. ဆွိရေးတဲ့စာတွေကိုလည်း လင်းကြိုက်သလို သူက အတော်ကိုချောတဲ့မိန်းကလေးမို့ သူ့ပုံစံလေးကိုလည်းချစ်ပါတယ်……… ဆွိဘ၀မှာ လိုချင်သောပန်းတိုင်နှင့်အတူ ပျော်ရွှင်မှုပေါင်းများစွာကို အမြဲထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း။
မမပစ်ဂီ ( မြန်မာချတ် )
လင်းရေးတဲ့စာပေတွေနဲ့ပတ်သတ် စော်ကားသူတွေကို လင်းဘက်က မခံချင်စိတ်နဲ့ တုံ့ပြန်ပေးတဲ့ ချစ်မမတစ်ယောက်ပါ……….. ဝေဖန်ရေးမဟုတ်ဘဲ မိုက်ရိုင်းတဲ့သူတွေကို အမှန်တရားဘက်က တုံ့ပြန်ပေးတဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိသူမို့လင်းသိပ်ခင်ရပါတယ်..
ချစ်ဖို့လည်းကောင်းသလို ဖြူစင်သောနှလုံးသားပိုင်ရှင် မမပစ်ဂီဘ၀အမြဲသာယာအေးချမ်းနေပါစေ။
မီးလေးမေ ( မြန်မာချတ် )
လင်းလက်နဲ့ လေပေးအတော်ဖြောင့်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ… သူ့ကိုခင်သလို သူနဲ့စကားပြောရတာလည်း အယူအဆ ခံယူချက်တွေတူပါတယ်..
မီးလေးဘ၀မှာ လိုချင်တာအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်ပါစေသူငယ်ချင်း..
ဆရာလိန် ( မြန်မာချတ် )
လင်းရေးတဲ့စာတွေကို အထူးအားပေးတဲ့ အကိုတစ်ယောက်ပါ.. လင်းလိုအပ်ချက်တွေကို ထောက်ပြလေ့ရှိပြီး လင်း စာတွေဆက်မရေးတော့ဘူးပြောတိုင်း လင်းကိုပြန်လည် စိတ်ဓါတ်ကောင်းမွန်လာအောင် အပျော်လေးတွေနဲ့ ပြောတတ်သူပါ..
ညနေက လင်းစိတ်ဓါတ်ကျပြီး ပြောချင်ရာပြောနေတဲ့အချိန်မှာ စာတွေဆက်ရေးဖို့ သေချာရှင်းပြခဲ့တဲ့ အကို့ကို လင်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်..
ကိုမင်း၂၀၀၅ ( မြန်မာချတ်)
လင်းနဲ့ နိုင်ငံရေး ဘာသာရေး ခံယူချက် ယူဆချက်တူသော အကိုတစ်ယောက်ပါ.. အမှန်တရားဘက်က အေးဆေးဆွေးနွေးလေ့ရှိပြီး လင်းရေးတဲ့စာတွေကို ဝေဖန်ထောက်ပြပေးသော အကို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်.
စကားနိုင်ပွဲ ၊ အမှန်ကိုထုတ်ပြောသော ရန်ပွဲတွေတိုင်း အတူတူတစ်ဖွဲ့တည်း ဆင်နွဲလေ့ရှိတာမို့ မကြောက်မရွံ့ပြောတတ်သော အကို့စိတ်ဓါတ်ကို လင်းအထူးလေးစားပါတယ်.. ပျော်ရွှင်ပါစေအကို..
ကိုမိုဟိန်း ( သြစတြေးလျ )
လင်းစိတ်ကူးထဲက ဇတ်ကောင်တစ်ယောက်က သူ့စိတ်ဓါတ်နဲ့အတော်တူတာမို့ အံ့သြခဲ့မိရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ…… သူနဲ့ အစက တည့်တာမဟုတ်ဘူး ဟိး ဟုတ်တယ်နော် ကိုမိုဟိန်း.. ၁နှစ်ကြာမှ တည့်သွားတဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ပါ.. ယောက်ျားပီသတဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိသူမို့ လင်း သူ့ကိုအတော်ခင်ပါတယ်..
ဆေးလိပ်တအားသောက်သူမို့ သူနေမကောင်းဖြစ်တိုင်း လင်းကအမြဲမှာတမ်းခြွေ ဆူလေ့ရှိတာမို့ ရီလည်းရီရပါတယ်..
ဖလိန်းးးးးးးးးး ( မြန်မာချတ်နှင့်ပလန်းနက်)
လင်း ခင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ပါ………. လင်းရဲ့နှလုံးသားမှာ ရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတစ်ခုက သူအဖြစ်အပျက်နဲ့တူတာမို့ သူက လင်းခံစားချက်တွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်..
သူ့ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးကိုကြိုးစားရင်း လင်းစိတ်ညစ်ချိန်တိုင်းမှာ အားပေးစကားပြောလေ့ရှိပါတယ်.. အကူညီလိုရင်လည်း ကူညီတတ်သူမို့ သူ့ကိုလူတိုင်းခင်ပါတယ်..
ဖလိန်းရေ နင်ဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံး အမှန်တကယ်လက်တွေ့မှာ ဖြစ်လာပါစေနော်.
သူကတော့ လင်းနဲ့ခင်တဲ့ အကိုတစ်ယောက်ပါ…… တစ်ချိန်တုန်းက အွန်လိုင်းက ပြသနာတစ်ခုအတွက် စိတ်ညစ်ပြီး လင်းတစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေချိ်န်မှာ လင်းအတွက် အများကြီးကူညီခဲ့တဲ့ အခင်ရဆုံးအကိုတစ်ယောက်ပါ……..
ထူးခြားတာက သူနဲ့လင်းက စကားပြောရင် သူများတွေနဲ့ပြောသလို အကိုညီမ သုံးလေ့မရှီပါဘူး.. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနင်နဲ့ငါသုံးတဲ့ ထူးခြားတဲ့မောင်နှမတစ်ယောက်ပါ ဟိဟိ
ပွင့်လင်းခင်မင်ပြီး လင်းကို အမြဲစိတ်မဆိုးဆိုးအောင် စလေ့ရှိတဲ့အကိုတစ်ယောက်ပါ…….. အကိုဒါဒါနဲ့အကိုညီလင်းဆက်က လင်းကိုခေါ်တဲ့နာမည်က တစ်ခုတည်းပါ ဟဲဟဲ
အကိုဒါဒါရေ ငါတို့တွေရည်မှန်းထားတဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့အတူ အကို့ဘ၀မှာ အရာအားလုံး ပြည့်စုံပါစေနော်.
ညီမလေးဇင်မာ ၊ ညီမလေးဂူးဂူး ၊ညီမလေးပန်းသီး
တကယ်ကိုခင်ဖို့ကောင်းတဲ့ညီမလေး ၃ယောက်ပါ… လင်းကို သိပ်ခင်ကြသလို ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားပြောလေ့ရှိပါတယ်..
သူတို့၃ယောက်က ရိုးသားပြီး တကယ်ကိုဖြူစင်ကြပါတယ်……….. ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ညီမလေး၃ယောက်ပါ.. ညီမလေးတွေရဲ့ပညာရေးမှာ အထူးချွန်ဆုံးဖြစ်ကြပါစေလို့ မမလင်းလက်ဆုတောင်းပြုပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
စိတ်ဆတ်ပေမယ့် တကယ်ကိုခင်ဖို့ကောင်းတဲ့အကိုတစ်ယောက်ပါ…. ပလန်းနက်မှာ သူနဲ့သိခဲ့ပါတယ်.. အတွေးအခေါ်တွေကောင်းသလို မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသူတစ်ဦးပါ……… သူ့ဘ၀နာကျင်ချက်စာတွေကိုဖတ်ပြီးချိန်မှာ စာနာခဲ့ပါတယ်.. သူ့ဓါတ်ပုံကိုစတွေ့ချိန်မှာ ပိုသိပ်ခင်မိသွားတယ်.. ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အကိုတင်ဇော်လင်းပုံက ညီမလေးလင်းလက် အကိုဝမ်းကွဲတစ်ယောက်နဲ့ သိပ်တူနေခဲ့လို့ပါ.. ထူးခြားစွာနဲ့နာမည်လည်း အတော်ဆင်ခဲ့ပါတယ်.. လင်းအကိုနာမည်က ကိုတင်ဇော်ဝင်းအောင်ပါ……… တပ်မတော်ထဲကလေကြောင်းဗိုလ်ကြီးဖြစ်ပြီးချိန်ကစ အခုထိပြန်မဆုံသေးပါဘူး…… ညိမလေး အကိုနဲ့သိပ်တူတဲ့အကိုလွမ်းဘ၀မှာ အမြဲပျော်ရွှင်နေပါစေအကို..
Posted by LIN LET KYAL SIN at 12:23 AM3comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:43 PM0comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 2:21 PM3comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 2:08 PM 1 comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 5:37 PM2comments Links to this post
အစက သူ့ကို ကြည့်မရခဲ့ဘူး။ သူသီချင်းတွေကိုတော့ ကြိုက်ပါတယ်။ လူကိုတော့ သူငယ်ချင်းပြောစကားများအရ သောက်မြင်အတော်ကပ်ခဲ့တယ်။
အဲ အပြင်မှာတွေ့တော့ အဲဒီလိုမဟုတ်တော့ အတော်အံ့သြမိပါတယ်။ သူနားနေတဲ့ နားနေဆောင်ထဲကို အစောင့်ကိုခွင့်ပန်ပြီး မောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့အတူ စကားသွားပြောခဲ့ပါတယ်။ အနီးကပ်ကြည့်မှ သူက အတော်ဖြောင့်တယ် ဟိဟိဟိ ။ သဘောလည်းကောင်းသလို အောက်ကျို့လည်းခံတော့ ကြိုက်သွားတယ် ဆိုရမှာပေါ့နော်။ သူ့လက်ကိုင်ဖုန်းကို ပရိတ်သတ်ကြားမှာတောင်းတော့ မပေးဘဲ သူ့အနားတိုးတိုးသွားမေးမှ ပေးပါတယ်။ ၁၉ရက်နေ့ညမှ ဆက်နော် မပြန်သေးဘူး အားရင်လာလည်ဆိုပြီးသူ့စင်ကာပူလိပ်စာကို ပြောတော့ လင်းမျက်လုံးဝိုင်းစက်သွားခဲ့တယ်။ စိုင်းစိုင်းလည်း ပရိတ်သတ် အတော်များပေမယ့် အဲဒီလောက် စကားများများမပြောဘူး။ ရဲလေးကတော့ လူကိုဆက်ဆံတတ်တာ ပါးနပ်တော့ လင်းအတော်ပြုံးခဲ့မိတယ်။ စိုင်းစိုင်းကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှမျက်လုံးချင်းတောင် ဆုံအောင်မကြည့်ဘဲ ခပ်တည်တည်လေးပါပဲ။
ရဲလေး အမေသီချင်းဆိုပြိး လက်ခုပ်သံလေးချီးမြှင့်ပေးပါခင်ဗျာလို့ပြောတုန်းက သနားလိုက်တာ။ ဟူးဟူး
ဂစ်တာလေးတီးပြီးသီချင်းဆိုတုန်းကပုံကို မောင်လေးတွေကို မရရအောင် လိုက်ရိုက်ခိုင်းတာတော့ နဲနဲလွန်သွားလားမသိဘူး။ မမအဝေးကတော့ ရီပြီးကြည့်နေပါတယ်။
အခုတော့ သူ့သီချင်းတွေလည်းကြိုက်လာသလို လူကိုလည်းကြိုက်လာသလိုပါပဲ ဟိဟိ
ရဲလေး ဒီထက်မက ပိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်ပါစေ။ လေးဖြူကို သူစကားပြောခဲ့တာ အထင်မှားခံရပြီး အဓိတ်ပါယ်မှားထွက်သွားတဲ့ သတင်းလည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပြုမိပါတယ်။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 5:24 PM0comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 4:59 PM 1 comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 2:56 PM0comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 3:04 PM0comments Links to this post
Posted by LIN LET KYAL SIN at 2:42 PM 1 comments Links to this post